कम्पनी - Airpull (Shanghai) फिल्टर कं, लिमिटेड
VCS र GHG
एयर कम्प्रेसर निस्पंदन
एयर कम्प्रेसर Lubircant
संकुचित वायुको लागि उपचार पछि उपकरण
फ्रिज एयर ड्रायर
एयर कम्प्रेसर फिल्टर तत्व
एयर फिल्टर मर्मतसम्भार
एयर कम्प्रेसर तेल फिल्टर को सफाई विधि
कम्प्रेसर तेल फिल्टर प्रतिस्थापन र रखरखाव
तेल फिल्टर कसरी छनौट गर्ने
Ingersoll Rand एयर कम्प्रेसर फिल्टर रखरखाव
एयर कम्प्रेसर एयर फाइलरहरूको प्रदर्शन सूचकांक
एयर कम्प्रेसर एयर आयल सेपरेटरको सावधानीहरू
हाम्रो कारखाना:१५ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको कारखानामा १४५ कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीको स्थापना भएदेखि, घरेलु र विदेशी नयाँ प्रविधिहरूको निरन्तर एकीकरणले उन्नत उत्पादन र निरीक्षण उपकरणहरू साथै उत्कृष्ट उत्पादन प्रविधिलाई अनुमति दिन्छ। फलस्वरूप, हामी वार्षिक रूपमा 600,000 युनिट एयर कम्प्रेसर समर्पित फिल्टरहरू उत्पादन गर्न सक्षम छौं। 2008 मा, हाम्रो कम्पनी ISO9001: 2008 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली द्वारा प्रमाणित भएको थियो। यो चीन सामान्य मेसिनरी उद्योग संघ को सदस्य भएको छ। हामी नयाँ उत्पादन नवीनताको लागि पनि प्रतिबद्ध छौं। विशेष गरी, हावाको तेल विभाजक हाम्रो स्व-विकसित उत्पादन हो, जसले जनवादी गणतन्त्र चीनको राज्य बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको उपयोगिता मोडेल प्याटेन्ट प्राप्त गरेको छ।
निरीक्षण उपकरण: दबाव परीक्षण स्ट्यान्ड
1. एयर तेल विभाजक वा तेल फिल्टर को कम्प्रेसन बल परीक्षण गर्नुहोस्।
2. हाइड्रोलिक फिल्टर परीक्षण गर्नुहोस्।
उपकरणको दबाब: 16MPa
ती निरीक्षण उपकरणहरूले हामीलाई उच्च योग्य फिल्टरहरू एकल गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हाम्रा कर्मचारीहरूका लागि कार्यालय सफा र सहज राखिएको छ। यो प्राकृतिक दिनको उज्यालोको प्रभावकारितालाई अधिकतम बनाउन डिजाइन गरिएको हो। फलस्वरूप, हाम्रा कर्मचारीहरूले राम्रो महसुस गर्न सक्छन्, र काममा थप ऊर्जा समर्पित गर्न सक्छन्।
एयर फिल्टर कार्यशाला:ओवल उत्पादन लाइनमा, सबै काम गर्ने ठाउँहरू सफा र सफा राखिएको छ। स्पष्ट जिम्मेवारी व्यवस्थापन संग, सबै आफ्नो काम मा व्यस्त छन्। दैनिक उत्पादन 450 एकाइ सम्म छ।
तेल फिल्टर कार्यशाला:स्पष्ट जिम्मेवारी व्यवस्थापन U आकारको उत्पादन लाइनमा लागू हुन्छ। तेल फिल्टर म्यानुअल र मेकानिकल रूपमा भेला गरिएको छ। यसको दैनिक उत्पादन 500 टुक्रा छ।
एयर आयल सेपरेटर कार्यशाला:यसमा दुईवटा सफा इनडोर कार्यशालाहरू छन्। एउटा कार्यशाला फिल्टरिङ मूल भागहरू तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जबकि अर्को एक फिल्टर विधानसभा लागि जिम्मेवार छ। एक दिनमा लगभग 400 टुक्रा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
ठेगाना: 4F, ​​No.420 Huiyu Road, Jiading जिल्ला, Shanghai, China
फोन: +८६ १८६०१७६४९६३
© एयरपुल 1996-2018 द्वारा प्रतिलिपि अधिकार: सर्वाधिकार सुरक्षित।